Olu sapho lwaBane lwakhiwe iKhaya eliNcinci laseKhaya eliNcinci apho uMntwana ngamnye unendlu yakhe - Indlela Yokuphila
Olu sapho lwaBane lwakhiwe iKhaya eliNcinci laseKhaya eliNcinci apho uMntwana ngamnye unendlu yakhe
Kwi-Facebook / ku-Emmerson Ong
Intshukumo encinci yekhaya iyaqhubeka ukutshayela uhlanga. Nangona kunjalo, ayizizo zonke iintsapho ezihamba ngendlela efanayo. Ngaphakathi Kutshanje kwabelwane ngebali likaKeli noRyan Brinks kunye nabantwana babo ababini, uLennox noBrody, abahlala kwilali encinci yekhaya 'eLondon, eKentucky.
Yonke le nto yaqala ngo-2015, xa usapho lwathenga umhlaba ongangeehektare ezingama-21 apho nge $ 57,000, ingxelo INSIDER. Endaweni yokwakha ikhaya elinye kulo mhlaba, babeka amakhaya amancinci amathandathu kuloo mhlaba, owawubiza i-20 000 yeedola. Babengenazicwangciso zokurenta la makhaya nangona-zontandathu zaziza kuba zezabo.
Elona likhulu kumakhaya amathandathu kwipropathi lilinganisa i-280 yeenyawo zenyawo. Inekhitshi (elincinci), igumbi lokuhlala, igumbi lokulala, kunye nendawo yangasese epheleleyo. Yilapho uKeli noRyan bahlala khona. Ngaphaya kwepropathi, intombi yabo ekwishumi elivisayo uLennox, oneminyaka eli-18, kunye nonyana oneminyaka eli-16 ubudala u-Brodey, ngamnye kubo unekhaya lakhe elizi-square-foot ezili-160.
'Ekuqaleni, umyeni wam wayefuna ukuba sonke kunye kwikhabhathi enye, kodwa ndaphikisana nabantwana egameni labucala,' uKeli uxelele i-Insider. Ngelixa kuyinyani ukuba abantwana banenani elifanelekileyo lokuzimela kwikhaya labo elincinci, iindawo zabo azinanto ibalulekileyo: izindlu zangasese.
Ngelixa amathathu kumakhaya amathandathu agcinelwe usapho ukuba lulele kulo, elinye ikhaya elincinci linikezelwe kumagumbi okuhlambela abantwana. Umntu ngamnye okwishumi elivisayo ufumana igumbi lakhe lokuhlambela; Nangona kunjalo, uLennox noBrodey kufuneka baphume phandle bayohlamba. Abantwana ababonakali ngathi, nangona kunjalo: 'Kubonakala kubi kakhulu kunokuba kunjalo. Ndibeka nje idyasi ukuba kuyabanda okanye kuyanetha. Ndizokuqokelela abaleke ndiye apho, utshilo uLennox. Eli khaya lincinci linegumbi leendwendwe kunye nenkqubo yokuwasha kunye nosapho, ukongeza kumagumbi okuhlambela amabini.
Ke asetyenziselwa ntoni amanye amakhaya amabini? Ikhaya elincinci eliziikwere ezingama-64 lisebenza kwiofisi yosapho, kulapho uKeli noRyan banokuthi baye kusebenza 'ekhaya.' Elinye ikhaya leenyawo ezili-180 lisebenza njengendlu yokuqubha yosapho. Apha usapho luza kuchitha ixesha kunye kunye nokudlala imidlalo. Indlu yeephuli ikhokelela kwidama losapho elingaphezulu komhlaba.
U-Keli uxelele u-Insider ukuba usapho lwakhe lukhethe eli lungiselelo lokuphila ubomi obuzinzileyo. Ezi zindlu zincinci zigcina amandla, kuba indawo ezincinci kulula ukuba zishushu kwaye zipholile. Ukwakhankanya ukuba usapho alunanzondo ekulandeleni imigaqo yeRRRR (yenqaba, inciphise, iphinde isetyenziswe, iphinde isetyenziswe), kwaye phakathi kwabo bane, kuveliswa kuphela ingxowa enye yenkunkuma ngeveki.
Unomdla wokuba neyakho indlu encinci? Apha zi Amakhaya ama-40 amancinci onokuwathenga ngokuthe ngqo kwiAmazon .
izimvo ezincinci zoyilo lwe studio encinci
Ukuveliswa kwefanitshala kumntla carolina